Vaovao - Sinopec Shanghai any Sina dia hamita ny tetik'asa fibre karbaona avo lenta amin'ny faran'ny 2022
BEIJING, 26 Aogositra (Reuters) - Sinopec Shanghai Petrochemical (600688.SS) dia manantena ny hamita ny tetikasan'ny fibre karbaona mitentina 3,5 miliara yuan ($ 540.11 tapitrisa) amin'ny faran'ny 2022 hamokatra vokatra avo lenta amin'ny vidiny ambany, tompon'andraikitra iray amin'ny orinasa hoy ny Alakamisy.
Rehefa nisondrotra ny fanjifana gazoala ary antenaina hisondrotra ny fangatahan'ny lasantsy ao Shina amin'ny 2025-28, dia mikasa ny hanao varotra samihafa ny indostrian'ny fanadiovana.
Mandritra izany fotoana izany dia te hampihena ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana i China, ny ankamaroany dia avy any Japon sy Etazonia, satria miezaka ny hahatratra ny fitakiana fitomboan'ny karbaona-karbaona, ampiasaina amin'ny aérospace, injeniera sivily, miaramila, famokarana fiara ary turbines-drivotra.
Ny tetikasa dia natao hamokarana 12000 taonina isan-taona amin'ny fibre karbaona 48K lehibe, izay misy 48 000 filament tsy tapaka ao anaty fonosana iray, manome azy hamafisina sy tanjaka matanjaka raha oharina amin'ny fibre karbaona kely misy ankehitriny izay misy 1.000-12.000 filament. Mora kokoa ihany koa ny manao azy rehefa novokarina betsaka.
Sinopec Shanghai Petrochemical, izay manana 1.500 taonina isan-taona ny fahaizan'ny famokarana fibre karbonina, dia iray amin'ireo mpanadio voalohany any Sina nandinika ity fitaovana vaovao ity ary nametraka azy io tamin'ny famokarana betsaka.
"Ny orinasa dia hiompana indrindra amin'ny resina, polyester ary fibre carbon," hoy i Guan Zemin, tale jeneralin'ny Sinopec Shanghai, nandritra ny antso tamin'ny kaonferansa, ary nanampy ny orinasa fa hanadihady ny tinady fibre karbaona amin'ny sehatry ny herinaratra sy ny solika.
Sinopec Shanghai tamin'ny alakamisy dia nitatitra tombony 1,224 miliara yuan nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny 2021, raha oharina amin'ny fatiantoka 1,7 miliara yuan tamin'ny taon-dasa.
Ny volan'ny fikarohan-tsolika solika dia nidina 12% ka hatramin'ny 6.21 tapitrisa taonina hatramin'ny herintaona lasa izay satria nandalo fanarenana naharitra telo volana ny orinasa fanadiovana.
"Manantena izahay fa hisy fetrany voafetra amin'ny filan'ny solika amin'ny tapany faharoa amin'ity taona ity na eo aza ny fisian'ny tranga COVID-19… Ny tanjonay dia ny hitazomana ny taham-pahombiazana feno ao amin'ireo faritry ny fanadiovana," hoy i Guan.
Nilaza ihany koa ny orinasa fa ny dingana voalohany amin'ny ivontoerana famatsiana hidrogen azy dia hatsangana amin'ny volana septambra, raha hamatsy hidrogen 20.000 taonina isan'andro, ary hitombo manodidina ny 100.000 taonina isan'andro amin'ny ho avy.
Sinopec Shanghai dia nilaza fa mikasa ny hamokatra hidrôzenina maitso, miorina amin'ny angovo azo havaozina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny morontsiraka 6 kilometatra hampivelarana ny herin'ny masoandro sy ny rivotra.
($ 1 = 6.4802 Shinoa yuan renminbi)